Sidee loo helaa hurdo fiican: tilmaamo iyo tabaha lagu helo nasasho fiican oo habeen ah | Ragga Stylish
Haddii aad baryahan dambe la il-darneyd hurdo la’aan oo aad la yaabban tahay, in ka badan sidii hore, sidii aad mar labaad u seexan lahayd, halkan waxaad ka heli doontaa talooyin iyo tabaha badan oo kaa caawinaya inaad ku guuleysato.
U kac inaad si buuxda u dayactirto oo aad u diyaar garowdo maalintaada bilaabaneysa berrito kuwan xeelado loogu talagalay nasashada iyo nasashada, kuwaas oo ah sida ugu fudud ee ay wax ku oolka u yihiin:
1 Sidee loo helaa hurdo fiican
1.1 Iskuday inaad nasato markaad soo galeyso habeenkii
1.2 Samee jadwal hurdo oo isku day inaadan waligaa ka boodin
1.3 Layli jimicsi
1.4 Sida loo gubo kalooriyado badan jimicsi ahaan
1.5 Qolkaaga jiifka ka dhig meel raaxo leh
1.6 Ka fogow kafeega dhammaadka maalinta
1.7 Maxay tahay inaad iska ilaaliso inaad si fiican u seexato
1.9 Isku day kaabis
Sidee loo helaa hurdo fiican
Helitaanka hurdo fiican habeennimo waxay kaa caawineysaa inaad ka hortagto cudurrada iyo shilalka, waxayna kaa caawineysaa inaad sida ugu fiican ugu shaqeyso xafiiska. Hurdo la’aanta sidoo kale waxay sababtaa wareegyo madow iyo, guud ahaan, muuqaal liita. Qashin-qubka, nasashada saxda ahi waxay faa iido u leedahay caafimaadkaaga iyo inaad aragti fiican ka yeesho. Aan aragno sida wanaagsan ee loo seexdo:
Iskuday inaad nasato markaad soo galeyso habeenkii
Gaaritaanka xaalad nasasho oo wanaagsan ayaa lagama maarmaan u ah inaad si fiican u seexan karto goor dambe.. Laakiin mararka qaarkood xaddiga walbahaarka ee aad uruursatay maalintii aad buu u sarreeyaa oo kuma filna inaad jeclaato, laakiin waxaa lagama maarmaan ah in shaqada loo maro farsamooyinka nasashada.
Waxay badanaa la xiriiraan oo keliya fekerka, laakiin talaabo kasta oo ku siinaysa fayoobaanta oo kaa caawinaysa inaad ka go'do waxaa loo tixgeliyaa farsamo nasasho. Kuwa ugu badan ee soo noqnoqda waa akhriska, dhageysiga muusikada iyo, waqtiyadii ugu dambeeyay, daawashada taxanaha, laakiin caadadaada nasashada waxay noqon kartaa mid gebi ahaanba ka duwan. Waa arrin uun in la ogaado waxa ay tahay lagana faa’iideysto.
Samee jadwal hurdo oo isku day inaadan waligaa ka boodin
Hurdada oo la seexdo iyo isla wakhtiga oo la soo tooso ayaa had iyo jeer doorbida hurdo tayo leh. Halkii, caadooyinka hurdo ee aan caadiga ahayn waxay kordhin karaan halista hurdo la’aan, maadaama ay caqabad ku noqon lahaayeen shaqeynta saxda ah ee laxanka wareegga iyo heerarka melatonin.
Way iska cadahay in jirka iyo maskaxdu ay qadarinayaan howlaha joogtada ah, iyo midka la xiriira jadwalka hurdada shaki la’aan waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad ku siin karto jirkaaga. Mar alla markii aad sameysid jadwalkaaga hurdada / tooska, ku dheji oo ha ka boodin. Maya, maahan sabtiyada iyo axadaha.
Jimicsigu waa mid ka mid ah xeeladaha ka dhanka ah hurdo la'aanta ee ay dhakhaatiirtu kugula taliyaan. Waana faa'iidooyinka isboortigu inay ka gudbaan jirka, iyagoo sidoo kale bixiya faa'iidooyin maskaxeed oo, midba midka kale ku daro, ka caawiya inuu fududeeyo hurdo la seexdo habeenkii.
Waa in la ogaadaa in jimicsigu uu noqon karo mid aan dhib lahayn haddii la sameeyo waxyar ka hor intaadan seexan. In sidan, Hubi inay ugu yaraan saddex saacadood u dhexeeyaan jimicsigaaga iyo wakhtiga jiifka.
Sida loo gubo kalooriyado badan jimicsi ahaan
Fiiri maqaalka: Jimicsiyo miisaan lumis ah. Halkaas waxaad ka heli doontaa sida loo gubo kalooriyaal badan si looga takhaluso kiiladaas dheeriga ah.
Qolkaaga jiifka ka dhig meel raaxo leh
Guud ahaan, iftiinka iyo buuqa badan ee qolka jiifka, ayaa tayada saboolka liita.. Sidaa darteed, mid ka mid ah waxyaabaha la sameeyo si loo hubiyo inaad hesho hurdo tayo leh ayaa ah in la yareeyo labadan arrimood sida ugu macquulsan.
Heerkulku sidoo kale wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa nasashada (Ma ahan fursad in xagaaga aad u jiifto hurdo xumo), laakiin xaaladdan waa inaad qalin jabisaa, haddii ay suurta gal tahay, iyadoo lagu saleynayo dookhaaga shaqsiyeed.
Ka fogow kafeega dhammaadka maalinta
Caffeine wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan, laakiin ka taxaddar wakhtiga maalinta aad doorato inaad koob bun ah yeelato. Haddii aad u soo bandhigto kafeyn jirkaaga dhammaadka maalinta, waxay noqon kartaa caqabad weyn in hurdo la seexiyo ficilkeeda kicinta darteed.
Maxay tahay inaad iska ilaaliso inaad si fiican u seexato
Fiiri maqaalka: Waxyaabaha saameeya tayada hurdada. Halkaas waxaad ka heli doontaa caadooyin, xaalado iyo cilado laga yaabo inay ka hor istaagaan jirkaaga inuu si sax ah isu hagaajiyo inta lagu jiro habeenkii.
Heerkulka sareeya wuxuu saameeyaa tayada qof walba hurdo, xitaa kuwii kuwii bartay beri hore sida wanaagsan loo seexdo.
Xilliga kuleylaha, gaar ahaan marka mowjad kuleyl ah dhacdo, waa lagula talinayaa maydhashada ka hor intaadan seexan sidii daawo u ah hurdo la’aanta ay keento heerkulka sare.
Isku day kaabis
Melatonin, valerian ... Waxaa jira noocyo kala duwan oo dheeri ah oo kaa caawin kara inaad si fiican u seexato waqtiyada qaarkood. Waxaa muhiim ah in la ogaado, in kasta oo ay faa'iido badan yeelan karaan habeennada qaarkood, waa inaad hubisaa inaadan aakhirka ku xirnaan doonin kaalmooyinkan, xitaa haddii ay dabiici yihiin.
Waxaan rajeyneynaa in talooyinkan ku saabsan hurdo fiican ay adiga waxtar kuu yeesheen. Sida xanuunada kale ee ku-meel-gaadhka ah, sida madax xanuun, haddii hurdo la’aanta ay sii socoto, ballan ka sameyso dhakhtarkaaga. Ka dib markaad barato kiiskaaga, isaga ama iyadu waxay soo jeedin karaan isbeddelo kale oo ku saabsan qaab nololeedkaaga oo ka duwan kuwii hore. Waxaad sidoo kale dooran kartaa daaweyn ama, haddii loo arko inay lagama maarmaan tahay, samee baaritaanno qaarkood si aad u hubiso in dhibaatooyinkaaga hurdada aysan keenin wax cudur ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Caafimaadka » Sidee si fiican loo seexdaa